Zvakandikurira Ndikarova nyoro kuParty!
Kutsvaga mari kunomboita kuti munhu ashaye kana nguva yekuzorora kana kutandara nevamwe. Pamba pandairoja ndaingoona landlord kupera kwemwedzi chete apa girlfriend pese paaifona ndaingoti ndiri kubasa zvekuti ndakazongoona munhu akusafona ndikaziva kuti pano ndatorambwa pano.Ndakazoti ndakumutsvaga zvikanzi aaah sha inini I moved on nekuti handikwanise kumirira munhu asingagone kundipawo nguva yekuswera neni kana kundisvirawo zvako ndiri munhu ndinoita zemo dzimwe nguva iwewe unongogara uri kubasa.
Ndaishanda murestaurant saka nguva yainetsa kuwana apa dzimwe nguva ndaitota madoubles kuti ndiite mari. One day ndakadeedzwa kune imwe party yaiitwa husiku hwese ndikamboda kuramba asi shamwari yangu yakabva yati unochaisa late you go kubasa manheru saka uuye sha. Ndakashaya marambiro since party yainge about 1km away from my house saka ndakati ndichibva kubasa ndokubva ndayenda straight kuparty ndichizviudza kuti ndikaitawo 1 hour ndoona shamwari yangu kuti azive kuti ndasvika ndobva ndaenda kumba kunorara.Chimwe chakandipa kuti ndiyende kuparty zveshuwa ndainge ndisisina nguva yekufara nevamwe.
Party yainge yakazara tuvana tweku college kwaiyenda shamwari yangu apa vese vaiyita kunge vadhakwa kare apa inini ndainge ndamborova one tekubirira kubasa saka ndainge ndiri sober compared to vanhu vese vainge vari paparty apa. Ndakabuda mumba ndokubva ndamira panze hangu ndichinwa ndipo pandakaoma rimwe babe rakagara richichema ndokubva ndasvika ndikamuti ko urikuchemei haana kupindura instead akanditambidza foni yake painge pane Whatsapp message yekuti ainge arambwa nemukomana wainge adanana naye for 5 years. Ainge arambirwa pafoni ndakamudzosera foni yake ndokubva atowedzera mhere kuchema, inini nekunyara vanhu kuti vanozofunga kuti ndini ndamuchemedza ndakamutora ndokubva ndanomugarisa mumota kuback seat.
Ndakagara paside ndichingomuti zvinowanikwa but ngaasacheme asi ndaizvinyepera nekuti aibva awedzera kuchema. Ndakabva ndamuti musikana akanaka sewe haafanirwe kuchema ndipo paakati unofunga kuti ndakanaka ndikati ehe ndikaona munhu akuita kasmile ndokubva andikisa ndikavhunduka kuti zvabva kupi asi vakomana ka unoziva kana munhu wadhakwa pfungwa dzimwe hadzishande bhoo. Ndainge ndakufunga nemboro ipapo nekuti ndakainzwa ichimuka. Yaiyita kuvhita vhita asi ndainge ndisingade kuyita kunge munhu arikutora advantage nemunhu akadhakwa asi iye ndiye aitoisa pressure, akatanga kundibata bata mboro iri mubhurugwa apa ichibva yatanga kuzvimba zvekuti akabva ayiburitsa ndokuiyisa mumuromo ndaikanzwa kakudziya kemate ake apa achitambisa rurumi pamusoro wemboro yangu.
Ndakatadza kuzvibata ipapo nekuti ndainge ndine zemo remwedzi mitatu chaiyo ndokubva ndatanga kumubata bata ndikanzwa babe radaira ndikaona munhu abvisa bhurugwa ndokubva asimudza makumbo mudenga akavhura beche rese, ndakamboita kaku hesitate asi semunhu aifunga nemboro panguva iyoyo ndakabva ndasvitsa bhurugwa mumabvi ndokuiti bvooo ndikanzwa mwana achemerera nokunakirwa. Ndaisvira zvekuti ndainzwa mota ichisheka sheka zvekuti dai painge pane vanhu panze vaitozviona kuti pane zvirikuitika.
Updated: March 1, 2018 — 6:29 pm